inhlokodolobha Golden-oluyingungu bekulokhu ezikhangayo izivakashi njalo. Nokho, nawu umbuzo, Ngokuvamile, lapho ukuhlala, ngakho-ke kwakungeyona abiza kakhulu isabelomali. Kunengqondo ukukhetha nedlelo eMoscow: lapha emoyeni isala ihlanzeke, ethule yokuhlala amanani ngaphezulu ezingabizi, futhi kalula engafinyelelwa ngesitimela edolobheni. Lokho kukhona ehhotela Odintsovo kuyoba siyindlela ephelele. Futhi kuthiwani ngalabo abaye ezithathwe uhambo isilwane? Ungakhathazeki, kukhona choice esikhulu lwamahhotela kubuzwa ngabazalwane bethu, lapho zinikeza ngezimo ezivamile eziphilayo.
Lena inethiwekhi esikhulu kakhulu owaziwa, okuyinto ijwayelekile Muscovites eziningi. Isiqubulo sabo - "ngemisebenzi yezinga eliphezulu ngenani enengqondo." Inkampani kungokwalabo ehhotela edume kakhulu Odintsovo, lihlangabezana zonke izimfuneko isihambi isabelomali, kungcono ehlanzekile ukhululekile, kanti yenani lamakamelo - ruble 920 ngehora. Ngesikhathi esifanayo, izivakashi ze-non-uhlobo "ejwayelekile", futhi Duplex zokuhlala, kuhlanganise imishini Hydro-massage.
Enye ukususa isibalo ngehora wena, uma udinga ukuphumula phakathi uhambo olude noma hambo. Leli hhotela e Odintsovo kancane eyaziwa: inikeza amakamelo ukhululekile ngamanani akhokhelekayo. Igumbi ngamunye ifakwe ifenisha ukhululekile, indlu yangasese kanye eshaweni, i-TV. It unikeza ibhulakufesi futhi ukufinyelela internet, ngaphezu, i-yokupaka elula. eduze kakhulu kukhona amathilomu eziningana nezindawo zokudlela lapho ungakwazi oda ukudla ekhaya. Izindleko ngehora sokuqasha amazinga - ruble 600.
Lena ihhotela ezingabizi kakhulu Odintsovo. Izinga wenduduzo iholidi lakho akusho ahlupheke, ukuthi kubaluleke kakhulu. Igumbi ngalinye has a esiqandisini futhi TV enkulu, ayina ibhodi nensimbi, ungakwazi ngokukhululekile ukusebenzisa i-Inthanethi. kukhona table tennis amatafula endaweni yokwamukela izivakashi. Umphathi ehhotela uthembisa ukudluliswa ukuya nokubuya esikhumulweni sezindiza futhi sesitimela eThembalihle, okuyinto iyisevisi elula kakhulu izivakashi. Inani - ruble 500 ngehora.
Ihhotela eziyinkimbinkimbi "Ark"
Kuyinto ihhotela elincane kodwa ethokomele, esemgwaqweni 11 amakamelo kabili ezahlukene induduzo amakilasi. Yenza iholide lakho abe ephelele, igumbi ngalinye ifakwe ifenisha ukhululekile yesimanje nemishini emisha. Okungukuthi, ungaqiniseka ukuthi ihhotela kuyoba zonke izimo ngoba ukuphumula okuhle. Njengazo zonke amahhotela e Odintsovo ngu ihora, ngokuvamile iba kukhethwa isabelomali abahambi abafuna ukuchitha isikhathi endaweni ethile phakathi izindiza noma uphumule phakathi hambo olude. Igumbi ngalinye has a yokugezela egcwele. Ukuze kube lula izivakashi esisogwini yokudlela phansi "Ark" ngeke ukuhlela ukulethwa khulula ukudla indlu. Ngaphezu kwalokho, sauna nge Jacuzzi, futhi igumbi aziphumulele. Ukwahlulela ukubuyekezwa, akuzona zonke izivakashi weneliseka isimo igumbi, kodwa uma ucabanga ukuthi lokhu ehhotela isabelomali, hhayi amafulethi ibhizinisi-class, isilinganiso "intengo - izinga" kuyinto ejwayelekile.
Mini-eziyinkimbinkimbi "Omakhelwane Abakahle"
Uma uyawazisa emkhathini, eduze nasekhaya, uzoyithanda le ehhotela elithile. Itholakala endaweni impumelelo. Ngakolunye uhlangothi, kuba pheze nendawo ingqalasizinda evuthiwe, futhi eMoscow kusukela lapha emnyango. Ngakolunye uhlangothi kuba khona ukuthula okukhulu onokuthula, ngakho umsindo edolobheni ngeke ukuphazamisa ubuthongo ebusuku yakho okuhle sika. eduze kakhulu kuyinto Vnukovo Airport, futhi izisebenzi ehhotela kuzoqinisekisa ungangikhulula kuye futhi emuva. Zidlala indima ebalulekile futhi amanani ezingabizi, kanye ezingeni eliphezulu wenduduzo egumbini. Igumbi ngalinye has a ifenisha yesimanje kanye ephezulu, zonke izinsiza ezidingekayo futhi Izinsiza. Ngaphezu kwalokho, ujabule service lihle izinga, abasebenzi friendly futhi okhathalelayo. zamanani Silinganisele ivumela izivakashi ngasinye ukhethe ukuthi kufanelekile kuye. standard Double kubiza ruble 2,000. ngelanga, inkokhelo ngehora. Ngaphezu amakamelo kanye Suites lapha sauna enkulu lapho ungakwazi phumula futhi ukuphumula okuhle. Against isizinda amahhotela eziningi embuso, kulesi siqhingi libukeka real ikhaya ukufudumala.
Zoogostinitsa ngoba izinja
Kuze kube muva nje, umqondo ukudala ehhotela kwakubonakala cishe kungazwakali, kodwa abantu baqala ukubona ukuthi kuyimfuneko. Akukhona njalo kungenzeka ukuthatha isilwane sakho ukuhamba futhi uma kunesidingo esinjalo, kudingeka ngokushesha ukuthola ukuthi ubani selula izinyawo isilwane sakho, okuphakelayo nokunakekela. Kungcono le njongo ehhotela efanelekayo izinja Odintsovo ngokuthi "Instinct". Ukwahlulela ngokubukeka ukubuyekezwa abanikazi, kuba ekhoneni wenduduzo ngempela nokufudumala, lapho ochwepheshe zangempela banakekele nezilwane, okuphakelayo uhambe nabo. Isebenzisa bezilwane futhi isilwane Psychology abafundisi inja bokudla. Lokho, isilwane sakho ngeke kube lula ube kude isikhathi idokodo, kodwa futhi ukuhamba, uxoxe nabanye ezifuywayo futhi uthathe amakilasi. Izilwane ezibekwe ezivalekile ukushisa namakhaza kanye linezingxenye ngabanye.
Ihhotela "Murka" amakati
Leli hhotela elincane kodwa ethokomele kakhulu Odintsovo. Imali Ngehora noma nsuku zonke uvumela ukuthi wena ukubala ibhajethi yakho, nemibandela ubuhle wakho inikezwa umane wasebukhosini. Azikho ezinkanjini futhi ezinkanjini, isivakashi ngamunye unikezwa ekamelweni elihlukile ebanzi iwindi sill, lapho angakwazi ukuhamba. Ukondla izilwane wenziwa izikhathi 3 ngosuku, ngaphezu, ngenxa yenani elincane izivakashi ngeke ngamunye unikezwe ukunakwa kanye service izinga.
Ihhotela inethiwekhi Izinja: Krasnogorsk, Tushino, Odintsovo
Sekuvele kukhona kudala futhi wakwazi ukunqoba uthando abanikazi izilwane kanye nabanikazi bazo. Ikakhulukazi uyajabula ukuthi akukho nenani elinqunyiwe lamakhasi amaseli lapho izilwane abampofu elinde zabanikazi. Lesi sithombe kungabonwa ku amahhotela Zoo ngokuvamile, kodwa hhayi Odintsovo. Amahhotela ngoba izinja ziyehluka anda induduzo. Okokuqala abantu amazwana ukubuyekeza yabo ukuthi izilwane bahlala amakamelo ukhululekile futhi ezinkanjini ngabanye, esikhulu futhi ivulekile. Kukhona inkundla yokudlala enkulu yokuhamba, lapho abasebenzi njalo lisetshenziswa. Ukuthatha isilwane sakho, uyoba umangale ukuthi ngijabulisa kanjani lapho izobukeka.
"I isilwane esincane"
Sesixoxile ngazo zonke abadumile mini-amahhotela e Odintsovo, ezihlinzeka eliphezulu ngawe lezifuyo zenu. Ngifuna wazi elinye ihhotela elincane enikeza indawo yezilwane ezincane bahlala. Kungaba nezinja, amakati, izinyoni kanye hamsters, izingwejeje nezinye ezifuywayo. Ngamunye wabo inikeza yokuhlala ukhululekile, usizo lochwepheshe futhi ezihlukahlukene ukudla feeds singekho. Kulokhu, intengo - ruble 400 ngosuku. Kuyinto ihhotela elincane futhi ethokomele ukuze izinja Odintsovo.
Uma uhlela uhambo oluya Golden Ring of Russia, uhambo eMoscow, noma nje elinde wena endiza ukulinda isikhathi eside ukuze indiza eduze enhlokodolobha, inikeza mini-ihhotela Odintsovo. Lapho ungakwazi ukuchitha isikhathi classy futhi akayi ngale isabelomali. Ngaphezu kwalokho, uyophila ngaphansi kwesimo okungukuthi esiseduzane kwekhaya lakho. Endaweni ehlukile, kufanele kuphawulwe ukubaluleka yokuthi namuhla kukhona kakhulu ephelele namahhotela ukhululekile izilwane zakho. Amakhulu abantu, uya eholidini, abhekene nenkinga efanayo: umuntu ukuba banakekele abafowethu ezincane. Manje iba ukukhetha ihhotela yifuyo (Odintsovo), lapho professional inja bokudla kanye zoopsychologists ukusebenza. isilwane sakho sizonikeza izimo zokuphila ezivamile, umsoco, kwakudingeka uhambo, ukunakekelwa nothando. Ukuze abanikazi wazola isilwane zabo, abanikazi amahhotela silondoloze njalo athintane nabo, ukuthumela izithombe kanye nemibiko vidiyo.
Lito 3 * (Greece / Rhodes) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Alania. "Ozkaymak Incekum" - lesikahle ngemindeni nezingane
Sultan of Dreams 5 * (Turkey / Side) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Ihhotela Clubhotel Riu Bellevue Ipaki 4 * (Sousse, Tunisia) izithombe kanye nokubuyekeza
Naxos Beach 4 * Ihhotela (Sicily, Italy): izithombe kanye nokubuyekeza
"Izinto ezesabekayo" ezithakazelisayo: uhlu olufushane we okuvusa usinga ejabulisa kakhulu
Ungadliwa Fondue: ubukhazikhazi Swiss
Isikebhe Origami: Indlela elula
Uba kanjani owesifazane bajabule, uma uwedwa? odokotela bengqondo ukweluleka
Bogner - izingubo ski lomhlaba
Pomelo. Izithelo for fun futhi ulahlekelwe isisindo
Uyini iqashwe? It - engenayo
Amathambo ebusweni: anatomy. amathambo ebusweni Yekhanda